Sarin'ny mozika sy mpihira ho an'ny Android | Androidsis
Te hampifanaraka ny sarin'ny telefaona Android amin'ny mpihira na vondrona tianao indrindra ve ianao? Azo atao izao amin'ny fisafidianana ireo sary an-tsary, asehon'ireo mpihira sy tarika tianao indrindra. Tsy hoe hitondra ny mozika miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra fotsiny ianao, fa afaka manana sary tsara indrindra amin'ny telefaona.
Jereo ato amin'ity galerie ity ny sary tsara indrindra an'ny vondrona na mpihira tianao indrindra, amin'ny kalitao tsara indrindra, ary safidio izay mety indrindra amin'ny telefaonao toy ny valiha. Aza adino ny iray amin'ireo vola ireo!
Fifanarahana amin'ny tsara indrindra mozika sy sary hiran'ny mpihira ho an'ny Android-nao. Te-hampifanaraka ny Android amin'ny mpihira na vondrona tianao indrindra ve ianao? Eto, manome safidy vitsivitsy anao izahay.
Raha tsy resy lahatra ianao, ity misy bebe kokoa sary for android maimaim-poana.